Tag: suuq -geynta | Martech Zone
Suuqgeynta Barnaamijka Suuqgeynta: Ciyaartoyda Furaha iyo La Wareegyada
In ka badan ganacsiyada 142,000 iyagoo isticmaalaya softiweerka otomatiga suuq geynta. Sababaha 3-da ah ee ugu sarreeya ayaa ah in la kordhiyo tilmaamaha u qalma, la kordhiyo wax soo saarka iibka, iyo hoos u dhaca kor u qaadista suuqgeynta. Warshadaha otomaatiga suuqgeynta ayaa ka koray $ 225 milyan illaa $ 1.65 bilyan 5-tii sano ee la soo dhaafay.
Microsoft Dynamics CRM iyo MarketingPilot waxay ku siinayaan aragti aad u baahan tahay si aad si fiican ugu fahanto macaamiishaada. Falanqaynta habdhaqanka iyo suuq geynta awooda leh, waxaad si sahal ah u bartilmaameedsan kartaa oo aad u kala geyn kartaa macaamiishaada, fahmi kartaa waxa ay xiiseynayaan, ka dibna ka qeyb gal iyaga waqtiga saxda ah fariinta saxda ah. Microsoft Dynamics CRM iyo MarketingPilot waxay bixisaa qalabaynta suuqgeynta shirkadaha iyo maareynta ololeyaal badan. Noocyada maareynta suuqgeynta Isku-dhafan ee 'MarketingPilot' - Qalabaynta iyo nidaaminta howlaha suuqgeyntaada
Qof ayaa weydiiyay Quora haddii boggooda ay ku tartami karaan qayb aad u camiran oo ka mid ah barta internetka. Su'aashu way fiicneyd inaan ka jawaabo halkaas… Waxaan rabay inaan dhamaantiin la wadaago jawaabteyda. Dabcan way tartami karaan! Mawduuc weyn ayaa had iyo jeer kor u kici doona xagga sare, iyadoon loo eegin sida boosku u badan yahay. Farsamooyinka kala duwan ee aad codsan karto ayaa ah: Noqo dhakhso - Haddii aad tahay barta ugu horreysa ama barta internetka ee si isdaba joog ah u qabta a